Waxqabadka sareeya ee Warshadaha 17-24ft HVLS Saqafka Fan aad u ballaaran soosaarayaasha iyo culeyska hawada | Bejarm
Waxqabadka sare ee Warshadaha 17-24ft HVLS Saqafka Fan Fan mug weyn oo hawo ah
Taageerayaasha korantada weyn ee warshadaha waaweyn ee Bejarm waxay adeegsadeen mabda'a shaqada ee 'Magnetically Levitated Train' si ay ugu beddelaan mawjadaha safarka toosan ee aagga magnetka wareegaya. Badeecadu waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah sida soo socota, waxqabadka sare, tiknoolajiyada hogaaminta, mugga hawada ee weyn.
Damaanad-qaadka cimriga guud ee warshadaha
14 - 24 fuudh oo dhexroor ah
Mashiinka birlabta ee joogtada ah
Baaxad buuxda oo kontaroolada karti u leh shabakadda
Si fudud isugu soo ururi xulashooyin dheeri ah oo kala duwan
Taxanaha taxanaha Aeolus waa nooc cusub oo taageere ah oo ay soo saartay bejarm oo ku saleysan tikniyoolajiyadda PMSM (Joogtada Magnet Synchronous Motor); dhexroorkeeda ugu badan wuxuu gaari karaa 7.3 mitir. Kaliya ma ahan buuqa inuu u hooseeyo 38 decibel, laakiin markii lagu daro qaboojiyaha, hawada gudaha si buuxda ayaa loogu qasi karaa. Isla heerkulka jidhka, waxay yareyn kartaa waqtiga bilowga ee qeybta qaboojiyaha ama damineysa qaar ka mid ah unugyada qaboojiyaha, oo badbaadin kara in ka badan 50% korantada. Taxanaha Aeolus wuxuu dhiirrigeliyaa wareegga hawada hawo bannaan oo leh waxqabad aad u sarreeya si loo gaaro ujeeddada shaqaalaha qaboojinta.
15800m³ / daqiiqo
Bejarm PMSMWaxqabadka iyo waxqabadka sare
Waxqabadka Super iyo waxtarka
Iyadoo la adeegsanayo habka ugu fiican ee algorithm, mashiinka mashiinka ayaa aad u hooseeya waxtarka guudna wuu sarreeyaa.
Xuddunta weyn iyo mugga hawada
Dusha sare ee xiriirka ee u dhexeeya stator iyo rotor wuxuu bixiyaa xoog wadis xoog leh oo deggan.
Taxanaha Aeolus - munaasabadaha ku habboon ee arjiga
Hore: Hawlaha Sare ee 20-26ft HVLS Saqafka Fan Fan hawlaha
Xiga: Ganacsi 12-16ft warshad weyn oo Saanqaada Fan ka raqiisan